🥇 ▷ Dragon Ball FighterZ: Gogeta waxay ka muuqataa muuqaallo cusub oo sawiro ah, iyadoo ku xukumaya farsamooyinkeeda, aad bey u jabin doontaa ✅
Dragon Ball FighterZ: Gogeta waxay ka muuqataa muuqaallo cusub oo sawiro ah, iyadoo ku xukumaya farsamooyinkeeda, aad bey u jabin doontaa
Muddo bil ah kama soo wareegin tan iyo markii uu Janemba ku degay Dragon Ball Fighterz, laakiin waa lama huraan in indhaha la dhigo Gogeta, halganka soo socda si uu ugu biiro ciyaarta Arc System Works. Y qaybtii ugu dambeysay ee sawirada Waxa laga soosaaray Bandai Namco ka dhigitaanka sugitaanka mid fudud.
Khilaafaadka u dhexeeya Goku iyo Vegeta ee aan ku arki karnay Dragon Ball Super: Broly wuxuu doonayaa inuu kasbado boos kooxdii dagaalyahanadaadii caadiga ahayd, iyo Meeshaad dhaqaajiso ayaa cudur daar fiican u ah.
Akhbaarta xun, taariikhda DLC-ga ayaa wali hawada kusii jira waxaana balanqaaday in uu dhowaan gaari doono dhamaan noocyada Kubbad baadi goos goos ah. Si kastaba ha noqotee, durba waa macquul in la arko horudhac farsamooyinkiisa burburka leh.
VidaExtra waxaan ku burburinaa dhammaan dhaqdhaqaaqyada khaaska ah ee Gogeta Super Saiyan Blue muujiyey intii lagu guda jiray hormarinta iyo sawirrada. Kulayl iyo mashquulin xoog leh oo ku filan si ay u xakameeyaan Broly xanaaq… oo riix inta kale ee ka soo horjeedda.
Midkii ugu horreeyay ee farsamooyinka Gogeta ma noqon karin mid kale. Sida Vegeto, oo sidoo kale laga heli karo ciyaarta, labada Saiyans waxay sameyn doonaan qoob ka ciyaarka ay Goku ka bartay metamorans-ka ee the otherworld.
Isbeddellada Super Saiyan Blue
Marka talaabooyinka la dhammaystiro, awooddan cusub ee awoodeedu weli ka sii badan tahay wadarta labada maaddooyin si gooni gooni ah ayaa muujin doonta awoodda ilaahyada, oo isu beddelaysa Super Saiyan Buluug.
Gogeta ayaa noqon doonta tii afaraad ee Super Saiyan Blue oo laga heli doono Kubbad baadi goos goos ah oo ay weheliso Vegeto, Goku iyo Vegeta, iyagoo awood u leh inay ku furfuraan labadan qaab ee ugu dambeeyay Arcade habka.
Awood yar oo tamar ah, isla mar ahaantaana, waa mid ka mid ah weerarada gaarka ah ee Veeta: hawada lagu xannibay oo laga quustey awood saafi ah, Gogeta waxay sameyneysaa awood firfircoon oo awoodoodu sareyso xaraashka iyo ilaalinta cadawga.
Isugeynta Xoogga Kamehameha
Kala duwanaanshaha weerarkii xiddigihii dugsiga Turtle ee Master Roshi. Gudaha Ball Ball FighterZ xoogga filimada ee filimka 20aad ee Ball Ball ayaa la ilaalin doonaa, isagoo beddelaya marxaladda xitaa ka hor inta aan la furin.
Waxaa la qiyaasayaa in ciidankan Kamehameha ee loo yaqaan ‘General Force Kamehameha’ ay ku saabsan yihiin Weerarkii Gogeta Meteor, kaasoo nooga qaadi lahaa sedex heerar oo buuxa oo ah tamarta korantada. Ugudambeyntii, waxaan ka tagi doonnaa wareejinta barta caafimaad ee cadowga.
Ma cadda haddii weerarkan, oo Gogeta dila ka dib markii uu ka gudbey hubka, uu noqon doono mid sii wada Jimcaha Guud ee Kamehameha (sida kan kale ee Gohan ee Meteor Atack) ama farsamo kale. Dabcan, mar haddii la qabto, cadawgeenna ma baxsan doono.
Gunno: Stardust Breaker
Sida lagu muujiyey trailerka janemba, halyeeyga halista ah ee Gogeta ku soo bandhigay filimka Sawirka Kubadda Z: wuxuu u muuqan doonaa ciyaarta sidii Dramatic Finish isagoo ku dhameysanaya dhabar jab xoog leh dhammaan sharwadayaasha xaalada ku habboon.
Gogeta wuxuu noqon doonaa dagaalyahan shanaad oo lagu daro lugta labaad ee Fighterz Pass ee Ball Ball FighterZ, oo waliba ay kujirto jilayaasha horay looga heli jiray Jiren, Videl, Goku yar iyo Janemba. Dabcan, ma noqon doonto kan ugu dambeeya: Broly wuxuu ku siin doonaa beddelka isaga oo ku ridaya biinka shafka.
FighterZ Pass 2 waxaa lagu qiimeeyaa 24.99 euro. Dabcan, waxaa sidoo kale jira ikhtiyaar u ah helitaanka dagaalyahanada aan rabno si gooni ah € 4.99 midkiiba. Ka dib oo dhan, maxaad u bixineysaa dabeecad aanan aakhirada u adeegsan doonin?
Marka la eego helitaanka, tixgelinta jadwalka taariikhda, Bandai Namco waxay u badan tahay inuu ka faa’iideysan doono macnaha guud ee Bandhigga Ciyaaraha Tokyo 2019, oo bilaaban doona Sebtember 12, si uu u bixiyo tilmaamo cusub oo ku saabsan imaatinka Gogeta. Waa inaanu feejignaano.